Wepamusoro 5 Big Data maitiro ekuti utarise muna 2017 - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Big Data, Big Data Analytics, Dhata Sayenzi, Indaneti yezvinhu,, IoT, Kufanotaura Ongororo, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Izwi rekuti 'Big Data' nhasi ririkushandiswa kutsanangura kugona kwedu kuita kuti tizive zvizere mavhoriyamu makuru e data achiwedzera zuva nezuva pasirese. Nedata hombe, isu tinogona ikozvino kuongorora uye kuunganidza data munzira dzaisakwanisika kunyangwe makore mashoma apfuura uye kuti iwe unoriidza data hombe, business intelligence, ongororo yedata kana analytics, hazvina basa. Nekuuya kwayo, nyika iri kupupurira kukuru shakeup mukuwongorora nekugadziriswa kwedata.
Pfungwa iyi yakawedzera uye ikakurumbira kumashure muma 2000s, uye kubvira ipapo iri kuenderera nekuumba mabhizinesi. Tine tsananguro dzakasiyana siyana dhata hombe uye nzira dzakasiyana dzekuti vanhu vanozvitsanangura sei. Big data izwi hombe rinofukidza zvinhu zvakawanda. Iri izwi remuraira, asi vashoma vanorirondedzera senyika yemikana yekuvandudza hupenyu hwevanhu. Huru data matekinoroji uye maitiro ari kufamba nekukurumidza. Makambani mazhinji uye mazhinji ave kuona simba redata uye chokwadi ndechekuti mazhinji emabhizimusi ari kutora dhata hombe mukuita. Asi vazhinji vavo, kunyangwe vakaisa simba rakawanda mukuunganidza uye kuongorora data, havasi kuwana mhedzisiro kubva mairi. Iko kuchine kushaikwa kwekuziva kana zano chairo kwazviri.
Ipo 2016 raive gore rakanaka rekuona dzimwe hombe uye dzinonakidza shanduko mukati big data uye tichifunga nhanho yazviri kuchinja, tine zvakawanda zvatinotarisira mumakore anotevera. Heano epamusoro makuru madhata maitiro anotarisirwa muna 2017.
1. Kukura kweAnalytics
Nedhadhi hombe richiwana mukurumbira munenge minda yese, tinoona kumuka kwepamberi, zvakanyanya uye nekukurumidza data analytics muminda yakaita se utano, IT, mari, Marketing and more. Currently, almost all IT firms and businesses have started using data analytics to fetch the right metrics for the amelioration of their businesses. Line managers and executives want analytics that give them instant actionable data. Unlike the majority of yakakura data analytics, havadi kumirira batch analytics chirevo. Izvi zvaizouya sekumanikidza kune vashandi veIT kuti vaite zviitiko zvinogoneka nekukurumidza zvakanyanya nekutarisa kwakadzama pane analytics uye data hombe. Kuziva analytics inzvimbo inogara ichikura, inogona kutowedzera kusimba nenguva. Iko kuomarara kwekuongororwa kwedata hakuna kuderedzwa kunyangwe paine dzimba dzekuchengetera dhata uye maturusi anoshanda.
2. Zvirinani & rakasimba dziviriro yedata
Kurwiswa kweCyber ​​kwakakura muhuwandu hwakawanda kubvira apo isu tese takatanga zvinoenderana nehunyanzvi hwedhijitari uye izvozvi zvanyanya uye zvakajairika. Makoronyera eCyber ​​atanga kunongedzera iwo ega data revanhu uye mabhizinesi kunze kwekuisa maoko avo kumasangano epasirese emari. Asi sezvo izvi zvese zvinowedzera, guru data analytics iri kukurumidza kuwana vabiridzi uye kudzivirira izvo kurwisa.
Kwete chete iro hombe dhata rinokamura uye kuisa patsva kurwisa kwecyber nekukurumidza asi zvakare zvinogona kubatsira vanoongorora bhizinesi kufanoona kurwiswa zvisati zvaitika chaizvo. Izvi zvinoitwa nekutevera maitiro ekurwisa uye kuomarara kubva kwakasiyana masosi. Tichifunga nezvekurwiswa kwese kwepamberi kwepamberi, zvingangoitika kuti kubva izvozvi, ese hurumende nemasangano akazvimirira ehukuru hwese uye maumbirwo achagadzirisa nyaya dzekuchengetedza idzi. Uye nedata hombe richipa ongororo inoshanduka yezvekutyisidzira kwecyber pamwe nekuwongorora, kupatsanura, uye kusefa kwedata, zvingatariswe senzira iri nani inowanikwa yemakambani kusarudza.
AI inoonekwa seyotevera hombe wave mune komputa yepasi. AI yakagadzirira kuunza nyika iri nani senge dzimwe shanduko huru pamberi peizvi. Yakafetwa neyakawandisa yedata uye yakakwenenzverwa neMutemo waMoore, chakagadzirwa njere iri pamwoyo wekufambira mberi kwemazuva ano kwehunyanzvi. Makambani kubva kune vanogadzira matoyi kusvika kune makuru vagadziri vemotokari vese vatanga kushandisa AI to better their products. Dhata analytics plays a major role in achieving milestones in AI, with machine learning kuva kiyi yayo.
Iwo ma'avatars 'kana evadigital vabatsiri ayo ari kushandiswa nemakambani mazhinji nhasi anoenderana neAI. Vanovavarira kupa rubatsiro rwakavimbika, rusina rusarura uye rwakarurama, nokudaro vachiponesa kuedza kwevanhu. Izvi zvine basa re dhata hombe kuti uongorore hombe data mapatani uye fudza avo vari mumasystem. Zvimwe zvakanaka zvinopihwa nedata hombe ndezvakawanda kutsvaga kwedatha, kudzikisira kukanganisa, kunyorera mune ekurapa uye ekushandisa edhijitari uye zvakanyanya kukosha kugadzirisa hupenyu hwedu hwezuva nezuva
4.Kukurumidza & nekuchengetedzeka kuchengetedzeka kwemari
Nedata hombe, isu nhasi tine kugona kuongorora uye kushandisa rakakura rakasiyana data kusanganisira biometric data, zvinyorwa zvakanyorwa, mifananidzo, mazwi akataurwa, kunyangwe matauriro ezwi redu nevhidhiyo zvemukati. Iyo yakagadzira nzira yayo munzvimbo dzakasiyana siyana kunyanya mu zvemari uye kubhengi. Panyaya yekuendesa masevhisi uye mashandiro, chikamu chebhangi chakakura zvakanyanya pamwe neepamberi guru data analytics. Nemaitirwo anoramba achiwedzera achiitwa zuva nezuva, kunoitika kunonoka mukushanda kana kusagadzikana muhurongwa hwekugadzirisa muripo. Uye pamapuratifomu epamhepo, panogara paine kutyisidzira kwezve kubiridzira mumabhangi. Iwo mabhanga akatotanga kushandisa guru data analytics negore, kugadzirisa nyaya idzi. guru data analytics zvinoita kuti zvive nyore uye nyore kumabhangi kuchengetedza kwakaringana yekutenga yekutevera uye zvakare inoita kuti vakwanise kuteedzera zvinyorwa zvekutengeserana. Big data inopa zvimwe zvakanaka zvakare:
Inokurumidza uye inoshanda zvakanyanya mashandiro ekushanda
Kubatanidzwa kuri nyore kwedata uye chengetedzo
Kubiridzira kuona uye kudzivirira kunogona kuitwa nyore
Nyore mutengi chidimbu
IoT yatove munzira yekushandura nyika. Indaneti yakaita kuti zvikwanise kubatanidza chero zvese zviripo zvakatipoteredza. Iyo firiji, muchina wekuwachisa, microwave uye kunyangwe hari dzako, ikozvino hapana chinhu chisina kubatika nenyika yedhijitari uye maIoT-based zvishandiso anosungirwa kuti awane hungwaru gore rino. Zvinhu zvezuva nezuva zvine ma IP adhiresi zvichakurumidza kuve chokwadi. Uku kutaurirana kwezvinhu kwave iko kwazvino kuona kwetekinoroji ichiti inovandudza hupenyu hwedu. Asi, isu tiri pamatanho ekutanga eIoT. IoT ichavhura hova nyowani dzemari, mamodheru ebhizinesi, uye ruzivo mune tekinoroji. Pamwero wakakura zvaizobatsira kune vese vashandisi vega kuvapa hupenyu hwepamusoro, kunyaradzwa, kuchengetedzeka uye nekambani zvaizobatsira mukuderedza mutengo, kuwana hunyanzvi uye kutonga zviri nani pamabhizinesi avo.
Nemidziyo mizhinji iri kuwedzerwa kune iyo IoT runyorwa gore rega rega, hombe data iri kuunganidzwa munzvimbo dze data dzemakambani iwayo. Kungobata iyo hombe huwandu hwesimba dhata rinouya kubva kunzvimbo dzakasiyana, dhata hombe rinopinda mukutamba.
Izvo hazvisi zvehunyanzvi chete uye zvinoshanduka asi zvakare zvinopa scalable dhizaini yekugadzirisa uye kubata yakakosha IoT dhata. With data hombe rakabatanidzwa neIoT, isu tinogona kutarisira kuona yakanyanya kubatanidzwa uye iri nani IT musika uye mafemu kutarisisa zvakanyanya pane hombe data rekubata uye kuunganidzwa kweIoT dhata.
Rondedzero yacho inogona kuenderera mberi…
Big Data has endless applications linked to it and just to cite, there are few examples. Ventures use big data to target and better analyze their users by linking together data from their evanhu vezvenhau accounts and also their own transactions as well. Industries track and analyze their mangetani ekupa delivery routes to optimize their processes, and combine this data with live traffic updates.
Iyo yakakura sei data iri kukanganisa iyo indasitiri yehutano
8 makiyi ekushandisa zvakanyanya iro rako hombe dhata
Wepamusoro ekufanofungidzira analytics zvishandiso izvo bhizinesi rako rinogona kushandisa
Zvikonzero bhizinesi rako rinofanirwa kufunga nezve chaiyo-nguva analytics
Zvikonzero nei Big Data mapurojekiti achitadza
Kana iwe uchitsvaga iyo Big Data mhinduro kana kuti unzwisise mashandisiro aungaita data rako, taura nekutaurirana.